Football Khabar » खेलाडीबीच भनाभन– मेस्सी काभानीसँग जुनसुकै बेला कुस्ती खेल्न तयार !
खेलाडीबीच भनाभन– मेस्सी काभानीसँग जुनसुकै बेला कुस्ती खेल्न तयार !
अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा गत राति अर्जेन्टिना र उरुग्वेले २–२ को बराबरी खेले । खेलमा उरुग्वेले दुईपटक अग्रता लिए पनि जोगाउन नसक्दा आफ्नो खास प्रतिस्र्धीविरुद्ध ६ वर्षपछि जितका मुखैमा पुगेर चुक्यो ।
प्रकाशित मिति ३ मंसिर २०७६, मंगलवार १५:५५